Ciidda oo Wasakh ah ama Sun gasho(Soil Pollution) – Qore: Dr Maxamed Siciid Shadheeye | SAHAN ONLINE
Ciidda oo Wasakh ah ama Sun gasho(Soil Pollution) – Qore: Dr Maxamed Siciid Shadheeye
Dr Maxamed Siciid Shadheeye
Ciiddu waa asaaska ama jiritaanka noolaha dhulka korkiisa ku nool ,dhibatada gaarta ciidda nooc kasta ha ahaate waxay saamayn dhab ah ku leedahay dadka,xoolaha,dhirta iyo degaanka intiisa kale.Intaynaan Ciidda iyo dhibatada gaarta ka hadlin waxaa ila fiican in la sheego:
Waxa ciiddu ka koobantahay.
Faa’idada ay ciiddu u leedahay inta nool.
Faa’iidada ay u leedahay habka wadajirka iyo xiriirka u dhexeeya noolaha sida:dadka ,dhirta, xoolaha iyo inta aan noolayn oo ah biyaha,hawada(ecosystem)
Maxay ciiddu ka kooban tahay.
Ciiddu waa qayb muhiim ka ah degaanka dabiiciga ah. waxayna ka kooban tahay wax yaabo kala duwan sida:
Macaadin: boqolkiiba afartan iyo shan(45%).
Hawo :boqolkiiba shan iyo labatan(25%).
Biyo: boqolkiiba shan iyo labaatan(25%) iyo walxo kale oo dabiici ah boqolkiiba shan (5%).
Ogow:Waxaa kaloo ciidda ku dhex jira tira aan la koobi karin oo noole (ili-maqabato ah),kana qayb qaata wanajinta ku noolanshaha dhulka
Maxay tahay faa’iidada ciiddu
Ciiddu waxay inoo leedahay waxtar badan oo aan la koobi karin oo dhankasta nolosha ka saamaya ,waxtarkaas waxaa ka mid ah :
Cuntada aynu cunno iyadan ka helaa, waa beeranaa,xoolaha aynu dhaqano ayaa ku nool,waxaan guryaha ku dhisano ciidday ka soo jeedan.
Duurjoogta ayaa ku nool oo waxay ka hesha cunto.
Waxay ka qayb qaadata ilaalinta isbedelka Cimilada.
Nadiifinta biyaha ayey ka qayb qaadataa.
Waa asaaska kaabayaasha bani-aadamka (foundation for human infrastruction) sida:biyaha,tacliinta, nafaqada,gadiidka , tamarta iyo wixi la mid ah.
FARRIIN: Ciida waxaa ku jira cuntada dhirtu u baahan tahay sida:biyihi,oksijiin iyo macaadin kale oo dhirtu ku baxdo.
Maxaa looga jeeda Ciidda oo wasakhi ama sun gasho?
Ciidda oo wasakhi gashaa waxay ka mid tahay burburka ku dhaca dhulka ,waana marka ciidda ay galaan waxyaabo nolosha aadanaha ,dhirta iyo xoolaha jiritaankooda halis geliya, sida marka walxo kimika ahi ciidda galaan oo ay isbedesho.Khatarta iyo waxyeelada soo foodsaarta degaanka iyo noolaha jiritaankiisa waxay ku xiran tahay hadba inta tirada iyo tayada wasakhda(sunta) ciidda gaartay ay dhan tahay.
FARRIIN: Haddii ciidda wasakh ama sun gasho dhulki beerta ku habboona ayaa lama-degaan, aan wax laga beeri karin noqda
Xaggee ciidda wasakhdu ama suntu uga timaada?
Ilha ay ka soo jeedaan waxyaabaha ciidda wasakhaya waxaa ugu badan oo ugu muhimsan kuwa uu sameeyo
Guud ahaan faragelinta lagu sameeyo degaanka iyo isbedelka degaanka ku dhaca waxay si toos ah samayn weyn oo la hubo ku leedahay nolosha iyo jiritanka bani-aadamka.
Meelaha ay ka soo jeedaan wasakhda iyo sunta ciidda gaarta waxaa loo qaybiyaa laba nooc:
Mid dabiici ah sida:Dhul gariirka, xaalufka.
Mid dadku sameeyo ,waxaana badan tan dadku sameeyo sida:
Wasakhda iyo suntan ciida lagu shut.
kimikad cayayaanka lagu laayo(buufiyo).
sunta lagu buufiyo caleenta dhirta ee jiran.
Bullaacadaha biyahooda(biyaha muqulaha) oo dhulka lagu shubo.
Qashinka noocyadiisa sida midka ay ku jiraan waxyaabaha ka soo jeeda elektaronik ( beteri,mobilka iyo kombuyuutar).
Olyada iyo shidalka noocyadiisa kala duwan ee lagu shubo dhulka.
Tusaale: Olyada marka matoorku isticmaalo way isbedesha oo waxay noqota sun, waxaa kalo ku milanta macaadin ka dhalata matoorka isxoqiisa oo qayb ka mdi ahi wax yeesho dadka,xoolaha,dhirta, biyaha,hawada iyo noolaha aan ishu qaban(ili ma aragtay) ee ciidda ku dhex nool
olyada motooradu isticmaaleen ee ciidda lagu daadiyo waxay dhibaato caafimaad u geysata dadka ee goobahaas olyada lagu daadshey ku nool. waxayna halis u yahiin cudurka kansarka iyo in degaanka ay ku bataan curruur aan xubnaha jirkoodu dhamaystirnayn,sidoo kale in ay batan dadka ka jiran beerka, kelyaha iyo sambabka. Dhibta ugu weyni waxay soo gaarta carrurrta oo iyagu ciidi olyada lahayd goob ay ku cayaaran ka dhigta
Sidee dhibaatada ciidda wasakhaysani inoo saamaysaa?
Waxyeelada iyo caafimaada darrida ka timada ciidda wasakhda ama suntu gasho, waa mid ka mid ah dhibaatada adduunka maanta ka jirta siiba dhawaca gaara noolaha iyo degaanka oo halista iyo dhibaatada caafimaad ee dadka soo gaarta waxay ku xiran tahay:
a)Habka qofku ula kulma wasakhda ama suntan sida: taabasho, neefsasho( iyo wixi lamid ah), la kulankaas oo noqda mid toos ah iyo mid dadban.
Wadada halista ciidda wasakhda ahi dadka ku soo gaarto,waxaa loo qaybsha sidan:
Mid toos ah: waana marka qofka jirkiisu ciid wasakh ah taabto ,Boor ama habaas ciid wasakhaysan ka yimid oo qofku hawo ahaan u qaato.
• biyaha oo ciid sumaysan ku milmay oo la cabo ,laguna qubaysto
• khudar, miraha bisil iyo cuntada la cuno oo ka soo baxday beer ciideedu sumaysan tahay
B)Nooc wasakhda ama suntan gashay ciiddaas waxay noqon karta mid fudud oo wax-yeeladeedu kooban tahay iyo mid halis ah oo dhib weyn caafimaadka gaarsiin karta
C)Xaalada guud ee caafimaadka qofka wuxuuna noqo nkara qofku mid jiran ama caafimad ah,halistuna waxay ku badan badanaysa qofka marka horeba jirana
Wax yeelada ka dhalata wasakhda ama suntu ciidda gasho
Bulshada maanta ku nool gobolo badan oo somaliya ka mid ah kama warhayaan dhawac degaanka loo geysto. Degma kasta oo geyigeena ka mid ah waxaa olyada babuurta lagaga bedelaa meeshi la doono,bakhtiga xoolaha gaarigu sido oo meeshi la rabo lagu tuuro ,beteriyada noocyadooda(moobilka,radiyaha)meel kasta ayaa ku arkaysa waxaas oo dhan marka roobku da’o waxaa qaada biyaha kuwaas oo dad iyo duunyoba cabbaan,dhirta biyahaas ku baxdana xooluhu cunaan .
Dhibatada ka timaada ciidda oo wasakhi gasho kuma eka halista ku sabsan waxyeelada caafimadka dadka gaarta, ee waxay saamaysaa biyaha, hawada iyo isbadel ciidda nafteeda ku dhaca,wax yeeladeeda waxaa ka mid ah:
Dhibatada ku dhacda caafimaadka dadka, taasoo ah mid jirka bani-aadamka intiisa badan saamaysa,cudurada ka dhashana waxaa ka mid ah:
Xubnaha jirka ee muhiimka ah oo jirrada sida:
• Maskaxda.kelyahay oo dhawac gaaro kaa soo ah mid aan dib loo daweyn Karin ,halistu waxay ku weyn tahay carruurta oo iyaga jirkoodu ku jiro marxalad koritaan kuna cayaara meel kasta
• Cudurka kansarka siiba kasarka dhiga(carrur iyo cirroole) iyo kan beerka deganka ku bata
Waxyeelo gaarta dhaqaalaha dadka, oo dalagga beeraha iyo calafka xoolaha la siinayo oo yaraada.
Ciidda oo isbedel ku dhaco wax yaabaha ay ka kooban tahay, sida iyado milixdu ku badato oo wax soo saar keedu yarado .
Hawada iyo biyahay oo waskhooba.
XUSUUSIN: Ciiddu wasakhowda ma aha mid ku habboon beerashada
Ogow:Ciidda oo wasakhowda dhibkeedu wuxuu si gaar ah u saamayaa caafimaadka habdhiska dheef shidka iyo maskaxda
Iska jir:Boqolkiiba todabatan(70%) wax yaabaha ciidda wasakhayaa waxay keenaan kansar
FARRIIN:Ciidda oo wasakh ama sun gashaa waxaa ka dhasha in ciidda tayadeedu xumaato oo dhawac gaaro walxihi dabiiciga aha ee ciiddu ay ka koobnayd,taaso keenta nabaad guur
Qoraalkani wuxuu qayb ka yahay buugga aan qorayo oo bilaw ah,wixii talo ah ii soo sheega